နေအိမ် » လှုပ်ရှားမှု » The Amazing World of Gumball Remote Fu
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: The Amazing World of Gumball Remote Fu
ထိန်းချုပ်ရေး: Play The Amazing World of Gumball Remote Fu Online
ကစား: 42,181 tag ကို: gumball ၏အံ့သြဖွယ်ကမ္ဘာ, gumball ဂိမ်း, Gumball, ရယ်စရာဂိမ်း
gumball ဂိမ်း၏အံ့သြဖွယ်ကမ္ဘာ - ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်တင်းမာမှု
Run, ခုန်နဲ့ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်တင်းမာမှုအတွက်ကြောငျးမှလွတ်မြောက်ရန်ပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်။ သူတို့ကျူးလွန်ဘဲတစ်ဦးနောက်ပြောင်မှုများစွပ်စွဲခံနေရပြီးနောက်, Gumball နှင့်ဒါဝင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ဖွင့်သော့ခတ်ခဲ့သည်။ အခုကအထဲကတွေဆီကနေရန်အချိန်ပဲ! သို့သော်ထိုသို့လွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ တစ်ခုချင်းစီကိုဌ
ဒါဝင်နှင့် Gumball မိုဃ်းပွင့်အတွက်ရှုံးနိမ့်သောသူအပေါင်းတို့သည်ထိုရုပ်ပွားတော်ကိုစုဆောင်းဖို့လိုပါတယ်။ ထိုရုပ်ပွားတော်ဖမ်းနဲ့ညွှန်တည်နေရာကိုရောက်စေဖို့ပလက်ဖောင်းနှင့်အတားအဆီးများဒါဝင်နှင့် Gumball Skip
gumball ၏အံ့သြဖွယ်ကမ္ဘာ: စစ်တိုက်ဘောလုံးပစ်သူ
အဆိုပါ Amazing Gumball ၏ကမ္ဘာ့ဖလား: တိုက်ပွဲဘောလုံးပစ်သူသည်သင်၏တိုက်ပွဲဘောလုံးပစ်အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက် Share! ဒီဂိမ်းကစားသောအခါသင်၏အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူပျော်စရာရှိသည်။
Gumball တစ်ဦးကရာတေးမာစတာ၏! သူဟာမြို့လမ်းများတို့၌တလျှောက်အပြေးနှင့်ဆိုးသော Ninja ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသည်။ သူ့ကိုအားလုံးမိမိရနျသူတို့ကိုအနိုင်ယူနှင့်သူ၏လမ်းပေါ်မှာရှိသမျှစွမ်းအင်ကိုသောက်သံဗူးစုဆောင်းဖို့ကိုကူညီပါ။ သတိထားပါအပေါင်းတို့နှင့်အတားအဆီးကိုကျော်လွှားရန်ကြိုးစားပါ။
gumball Dino မြည်း dash
Gumball အားကစားပြိုင်ပွဲရှာဖွေနေပါသလား ကာတွန်းကွန်ယက်ပေါ်တွင် Dino မြည်း Dash Play ။ Tina T-Rex Anais '' Daisy မြည်းရုပ်ကြာတဲ့အခါ, Anais သူမ၏ပြန်ရကိုကူညီ Gumball နှင့်ဒါဝင်စုဆောင်းလေ့ကျင့်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုရိုးရှင်းပါသည်။ အဆင့်တစ်: wakin မပါဘဲ Tina ရဲ့ lair သို့ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်
အဘယ်သူမျှမကအခြားတူသောသရဲခြောက်သောအိမ်နောက်ပြောင်မှုများအဘို့အဆင်သင့်ရ! Gumball ၏မိတ်ဆွေများရဲတစ္ဆေအဖြစ်ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်သူ့ကိုတွှေဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ သူတို့အပျေါမှာကျောက်ပြား Turn! တကယ့်တစ္ဆေသို့လှည့်နှင့်အတု Phantom ချ လိုက်. မှ ectoplasm သောက်ပါ။ သင်သရဲအခြောက် manor လွတ်မြောက်ရန်နိုင်သလား
ကောင်းကျိုးဟောင်း Bomberman ၏တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်ဇာတ်ကား။ နယူးဇာတ်ကောင်, လက်နက်နှင့်စွမ်းရည်, ဖျက်ဆီးဖို့ရန်သူများကိုသွားနှင့်အန္တရာယ်ရှိရန်ခက်ခဲရီနာကှငျးအများကြီး။ သုံး Modes သာ - ရှင်သန်မှု, Arcade နှင့်အချိန်။ သငျသညျသူတို့အားလုံးကိုဖြည့်စွက်နိုင်တော်မူမည်လော ကစစျဆေးပါစေ!
မြားစှာသောအတားအဆီးရှိပါတယ်ရှိရာပန်းခြံထဲမှာ Gumball ဘုတ်စကိတ်စီးခြင်း။ Gumball ရဲ့မစ်ရှင်လုံခြုံစွာအားလုံးအတားအဆီးကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့နဲ့ finish ကိုလိုင်းမှရန်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျလမျးပျေါမှာမြင်သောအချက်တွေကိုစုဆောင်းပါ။